Kedu otu esi eji akwa akwa akwa? - Buddhatrends
Ọ dịghị nwanyị nọ n'ebe ahụ na-echeghị echiche banyere ịkwa uwe ogologo ọkpa karịa kama ime ka obi ghara iru ya ala ma gbasie ike ogologo ụbọchị dum, ha ga-eme ka ọ nwee mmetụta dị mma, nke dị mma, ire ụtọ na nke kachasị mma.
Uwe ọkpa a bụ ihe dị oké mkpa mgbe ọ na-abịa n'ịhọrọ nkasi obi n'etiti uwe ogologo ọkpa na ndị ọzọ dị iche. Kedu ihe, ọbụna karịa, ịchọrọ ịchụ àjà dịka nke ọma, ma na nke ahụ, ha ga - emezi "egwuregwu" gị. Ha na-abata n'ụdị dịgasị iche iche na usoro dị iche iche maka oge ọ bụla o kwere mee: nke a na-eji ụdị ihe atụ a na-atụgharị anya na ihe ndị na-acha anụnụ anụnụ, nke nwere àgwà a na-egbuke egbuke, nke na-acha ọcha na-egbuke egbuke. A na-eji akwa akwa akwa na-eme Haremrụrụdị mma ma na-agbanye gburugburu nkpere ụkwụ ma ọ bụ nwa ehi. Ị nwere ike ghara ịhụ ya na ihe ndị a dị iche iche na-adọrọ adọrọ nke na-eti mkpu FUN!
Ejila textures na ihe dị iche iche mara mma tụọ gị ụjọ ma a bịa n'iwekọta ihe mkpuchi harem. Site na usoro aghụghọ ole na ole, ị nwere ike ime ka ha na-arụ ọrụ maka oriri na nkwonkwo kwa ụbọchị dị ka ihe gbasara nnọkọ na ihe omume.
Nwee obi ụtọ n'inwekọ ọhụụ kwa ụbọchị.
Ihe a na-eji ejiji dị mma ga-adị mma n'arụ ọrụ gị kwa ụbọchị site na ntanye dị elu ebe ọ bụ na ala ahụ na-ada ụda na olu. Soro ha na T-shirts dị mfe, okpukpu n'elu, n'èzí ihu, uwe elu, peplum n'elu, ihe ubi n'elu dabere na oge ahụ.
Ejikọtara ya na mkpịsị agba aja ma ọ bụ na-acha odo odo na-emepụta ihe dị mfe ma dị mma ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na ifuru na-acha akwụkwọ ụtọ. Ịkwado ya na akpụkpọ ụkwụ dị mma dị ka ndị na-anọghị na-emepụta ihe na-egbuke egbuke ga-eme ka ejiji ahụ mara mma ma mara mma. Nweta uwe niile na-agbakwunye ọla aka, ọla ntị sexy, na olu na echefula iji wetara gị Tote akpa ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ya. Ị nwere ike iji ejiji dịka nke a mgbe ị na-apụ na ngwụsị izu, n'ihi na ụfọdụ na-eme ma ọ bụ oriri.
Maka uwe eji edozi onwe gi karia isi ruru, ị nwere ike ịhọrọ onye nwere ahụ iru ala. Nkume a dị mma na ntụrụndụ, ma ọ bụ ejiji na ejiji ejiji ejiji ejiji na akwa uwe. Ịcha uwe ọcha ga-eme ka ọkpụkpụ ahụ "pop" ma ọ bụ ihe mgbakwunye. Ị nwere ike ijikọ uwe ahụ na otu sneakers ọcha ma ọ bụ wedges dị mma maka anya edgy. Tinye àgwà dị iche iche na àgwà site n'itinye ihe na-esi ísì ụtọ, ihe nro dị mfe, akpa akpa akpa ma ọ bụ ọbụna Panama hat na ị dị njikere maka ịzụ ahịa ụlọ ahịa ma ọ bụ kọfị na ndị enyi gị.
Nwee obi iru ala na-arụ ọrụ.
Maka ụbọchị a na-ahụ maka ọfịs, ị nwere ike ịmepụta uwe na-enweghị atụ nke ga-ele anya iji gbasie ike na-agbakọta ma na-aga n'ihu, nke oge a na nke iwu n'otu oge ahụ. Mgbe ịnọ n'ọfịs, ị ghaghị igosipụta akpụkpọ anụ ma ọ bụ nhichapụ ma gbasoo koodu uwe ejiji. Maka nchikota na-emeri na-aga site na ncha nke a na-acha ọcha nke na-eji akwa ákwà na ụfọdụ uwe harem na-acha oji, nke a na-agbanye na waistline karịa ka ọkụ na-emepụta ma na-emesi ahụ ike gị ike. Ị ga-ele anya na-enweghị atụ na nkà na uwe na-acha ọcha na agba.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ụda agba na obodo ukwu na ịmepụta ọrụ ụlọ ọrụ gị, i nwere ike ịtụba ọla na-acha ọkụ na ọlaọcha minimalistic na mgbanaka n'ime ọlaọcha ma ọ bụ na-acha odo odo.
Tags: Harem Pants maka Women, Ọzọ Size Harem Pants, Owu Harem Ekeji